एमालेलाई सराप्दै आएका महन्थ ठाकुर एमाले पार्टी मुख्यालयमा पुगेपछि ….. – YesKathmandu.com
एमाले पार्टी तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मधेशविरोधी नेताको रुपमा टयाग लगाँउदै आएका मधेशी नेताहरुको मन प्रचण्डसँग फाटेकै हो ? वा,फेरि पनि मधेशी नेताको केमेष्ट्री नेकपा एमालेसँग मेल खान पुगेको हो ?
नेकपा एमालेले विजयादशमी, दीपावली, नेपाल संवत् र छठ लगायतका चाडपर्वका अवसरमा शनिबार शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराही शङ्खपार्कमा भएको चियापान कार्यक्रममा मधेसी दलको तर्फबाट तराइ मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहभागिता जनाएसँगै यो प्रश्न सघन बन्न पुगेको छ ।
संविधान संशोधनसहित संघीयताको विषयमा एमाले र मधेसवादी दलबिच मतभिन्नता छ । यसले गर्दा मधेसी दल र एमालेको सम्बन्ध त्यती राम्रो नभएका बेला एमालेको चियापानमा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर जानुलाई अर्थपूर्ण रुपले हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका मधेसी दलले तिहार भित्रमा संविधान संशोधन गर्न नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने बताएका छन् । संविधान संशोधनका लागि एमाले बाधक बनेको सत्तारुढ दलले बताउँदै आएका छन् । तर चियापानमा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर जानुले सकारात्क संकेत भने मिलेको छ ।
एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले सुरुवात गरेको चियापनलाई पार्टीले निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
आइतबारदेखि निजी विमान कम्पनीका आन्तरीक उडान बन्द हुने
उपसभापति पौडेल र भारतीय राजदूतबीच भेटवार्ता
विनाशकारी महाभूकम्पमा परी ४३१० मृत्यु, ८ हजार घाइते